Waaxda dalxiiska waa inay ku dhawaaqdaa inay furan tahay Dowladda Nepal
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Nepal » Waaxda dalxiiska waa inay ku dhawaaqdaa inay furan tahay Dowladda Nepal
Jebinta Wararka Caalamka • Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • Wararka Dowladda • Wararka Nepal • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wtn
Dhibcaha: Boostada Dalxiiska
Ganacsatada Dalxiiska ee Nepal ayaa Kulmay si ay u Fududeeyaan Waxqabadka Dowladda:
Nepal waxaa loo xiray warshadaha ugu macaashka badan COVID-19 awgeed
Kulan ay leeyihiin madaxda sare ee dalxiiska, oo uu soo qabanqaabiyay agaasimihii hore ee Guddiga Dalxiiska Nepal, Deepak Raj Joshi ayaa go'aansaday inuu ka codsado dowladda inay ka saarto shuruudaha karantiil ee socdaalayaasha la tallaalay si loo kiciyo dalxiiska Nepal.
Iyadoo la tilmaamayo in shaqaalaha dalxiiska safka hore hadda la tallaaley waa mowqifka kooxaha ee ah in waaxda dalxiiska ay ku dhawaaqdo dowladda Nepal.
Intaa waxaa dheer kooxdu waxay ku cadaadineysaa dib u bilaabista fiisooyinka markay timaaddo iyo kor u qaadista baaritaanka PCR ee gegida diyaaradaha
Halka qaybaha Nepal ay dhawaan oqalinka lagu duugay iyada oo la xaddiday, sida hoolalka shineemooyinka iyo makhaayadaha oo leh awood dhan 50%, laakiin ma jirin wax cusub oo ku saabsan xayiraadaha safarka Nepal lix bilood gudahood.
Xoghayaha PATA Suman Pandey ayaa ku biirey dareenka ah in marka imaanshaha fiisaha la siiyo socdaalayaasha la tallaalay iyo in meesha laga saaro shuruudihii karantiilnimada. Dowladda dhowaan la dhisay weli ma buuxin boosas badan oo ka mid ah golaha wasiirrada waxayna ku dhex jirtaa arrimaha gudaha siyaasadda xisbiyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda sidaa darteed waa la arki doonaa haddii ay dowladdu awood u leedahay inay qaado tallaabo kasta oo lagu kicinayo qaybtan muhiimka ah ee dhaqaalaha Nepal.
Deepak Raj Joshi ayaa sidoo kale ah wakiilka Nepal ee gudaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka, waxaana lagu abaalmariyay inuu ku biiro Barnaamijka Geesiyaasha Dalxiiska ee WTN.